တံခါးကိုဖွင့ ်. , Automatic ဆွဲယူတံခါးအော်ပရေတာထုတ်လုပ်သူဆွဲယူတရုတ်အလိုအလျောက်တံခါးပစ္စည်းများ, Automatic
Home > ထုတ်ကုန်များ > တံခါးကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း > အလိုအလျောက်တံခါးပစ္စည်းများ
အလိုအလျောက်တံခါးပစ္စည်းများ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, အလိုအလျောက်တံခါးပစ္စည်းများ, အလိုအလျောက်ဆွဲယူတံခါးကိုဖွင့ ်. ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အလိုအလျောက်ဆွဲယူတံခါးအော်ပရေတာ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
တံခါးဖွင့်အော်ပရေတာဆွဲယူ high စွမ်းဆောင်ရည်မှာ Automatic  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအမြင့်စွမ်းဆောင်ရည်အလိုအလျောက်တံခါးဖွင့်အော်ပရေတာအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုဆွဲယူသည်: မော်ဒယ်: DC-150 တံခါးကိုအရွက်: တစ်ခုတည်းအရွက် (s) ကိုနှစ်ချက်ရွက် (ဃ) တံခါးကိုအရွက်၏အလေးချိန်: s≤1 * 160kg, d≤2 * 230kg...
တရုတ်နိုင်ငံ အလိုအလျောက်တံခါးပစ္စည်းများ ပေးသွင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုအလျှောက်တံခါးကိုပစ္စည်းများ 1 မော်တာ + ဂီယာလျှော့ချ, 1 ခါးပတ်,7မီတာ, 1 ပျင်းရိစက်သီး, microprocessor, ရထားအပြာဘီး4အစုံ, ကြမ်းပြင်လမ်းညွှန်များ2စုံ, အဝေးထိန်း 2pcs,2စုံကိုခါးပတ်ညှပ် mounting ကွင်းခတ်, 1 power supply များပါဝင်သည် ကကြိုးများနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုး connectors,2တည်နေရာ, အဘယ်သူ၏အရှည် 2,08 မီတာ,3မီတာ, ဒါမှမဟုတ်4မီတာဖြစ်ပါတယ်လူမီနီယမ်လမ်းကြောင်း။
ကျနော်တို့လူတွေအဆင်ပြေများကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲလျက်ရှိသောအော်တိုတံခါးကိုဖွင့်လှစ်တဲ့ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ဝန်ဆောင်မှု၏အဆင့်များကိုအလိုအလျောက်တံခါး Systems` drive ကိုဒါပေမယ့်အလိုအလျှောက်တံခါးများ ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာကြပြီရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုအလျှောက်လျှောတံခါးကိုစနစ်များ, ခေတ်သစ်အာကာသ-saving နှင့်ကြော့ဖြစ်ကြသည်။
အလိုအလျှောက်အပြည့်အဝဖွင့်လှစ်အကျယ်နှင့် / သို့မဟုတ်လျှော့ချဖွင့်လှစ်အကျယ်နှင့်အတူ mode ကို, သာအသွားအလာထိန်းချုပ်ဘို့ထွက်ပေါက်: အလိုအလျောက်လျှောတံခါးများပါဝင်သည်အချို့သောအရာများစွာကိုအခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုရှိသည်။ အလိုအလျှောက်တံခါးများဖွင့်ပွဲကိုလည်းဖွင့်လှစ် width ကိုသေးငယ်သို့မဟုတ်ပိုကြီးအောင်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ လူပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုအတွက်ထောက်လှမ်းဇုန်၌ရှိကြ၏လျှင်ထိုကဲ့သို့သောဘေးကင်းလုံခြုံမှုအာရုံခံကိရိယာအဖြစ်အရေးကြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပိထဲကနေတံခါးကိုတားဆီး။ တံခါးကိုအရွက်ဘယျလိုမှမဖြစ်ကြပါလျှင်မဖွင့်တဲ့အခါမှာပိတ်ပြီးသောအခါသူတို့ချက်ချင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်သို့မဟုတ်တံခါးကိုအရွက်နှောင့်နှေးနေလျှင်, သူတို့ကတစ်ဦးကိုချက်ချင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုအလိုအလျောက်နောက်ပြန်ဆုတ်ယန္တရားအားဖြင့်ရပ်တန့်နေကြပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူကြိုက်အများဆုံးလျှောအော်တိုတံခါးကို။ သွားလာရင်းမှတံခါးကိုနေ့စဉ်အလိုအလျောက်လိုအပ်ချက်များအတွက်အတိုင်းဤစဉ်းစားပါ။ အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုအပြည့်အဝအစာရှောင်ခြင်း, ဒုက္ခ-အခမဲ့တပ်ဆင်ဘို့စမ်းသပ်စက်ရုံမှာ Pre-စုဝေးရောက်လာကြ၏။
Applications ကို: လက်လီ, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, လေဆိပ်, ဧညျ့, သန့်ရှင်းသောအခန်းများ။ ရှန်ကျန်း Hongfa အလိုအလျောက်တံခါး Co. , Ltd မှ rated တံခါး, ဒီဇိုင်းစမ်းသပ်မှုနှင့်သင့်ပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ စက်မှုဇုန်, စီးပွားဖြစ်, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်လက်လီအသုံးပြုရန်အလိုအလျောက်ဆလိုက်တံခါးများ။ ဆေးရုံတွေ, လေဆိပ်, လက်လီစင်တာများ, ဆေးဆိုင်များ, ဟိုတယ်, ကုန်စုံစတိုးဆိုင်, ဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးဆိုင်များ, ကုန်ပစ္စည်းစတိုးဆိုင်အားကစားနှင့်ပိုပြီး: သင်အပါအဝင်တည်နေရာကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက်တစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အလိုအလျောက်လျှောတံခါးများတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အလိုအလျောက်ဆွဲယူတံခါးပေါက်ဖြစ်စေတစ်ခုတည်းတဦးတည်းဦးတည်လျှောတံခါးကိုသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ရာအရပ်, တစ်ဦးချင်းစီတံခါးကိုအရွက်ဆလိုက် bi-နှုတ်ဆက်စကားတံခါးများရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ဟာမကြာခဏ, ကုန်စုံစတိုးဆိုင်များတွင်ကုန်တိုက်ကြီးတွေ, ဆေးရုံများနှင့်သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များကသင်၏ building.In များအပြင်တစ်ဦးအခမဲ့လုံခြုံလွယ်ကူလက်တို့ကို access ကိုပေးချင်ဘယ်မှာအခြား application မှတံခါးဝကိုအသုံးပြုအလိုအလျောက်တံခါးများ၏အကြီးမားဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်များထဲမှစွမ်းအင်ချွေတာဖြစ်ပါတယ်နေကြတယ် ။ တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့အဆောက်အဦးအတွက်သို့မဟုတ်ထွက်ကြွလာသောအခါတံခါးကိုမဟုတ်ရင်အချိန်ကြာမြင့်စွာဖွင့် left စေခြင်းငှါလာသောအခါထိုအတံခါးများသာပွင့်လင်းကတည်းကကြောင့်စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။
အော်တိုတံခါးကိုလျှောများ၏ထိန်းချုပ်မှု device ကိုအခြေခံတဲ့ function နှင့် extensional function ကိုပါရှိသည်, အော်တိုစစ်ဆင်ရေး / ကိုင်ထား-ပွင့်လင်း / / ဝက်ပွင့်လင်းဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပိတ်လိုက်တယ်။ လျှပ်စစ်လျှောတံခါးကို controller ကိုသင်၏အသက်တာနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုမိုဘေးကင်းလုံခြုံရေးစောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့အပြည့်စုံ access ကိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များအဘို့အမျိုးစုံ interfaces ရှိပါတယ်။ ကဲ့သို့သော: အာရုံခံစသည်တို့ကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုရောင်ခြည် photocell, လျှပ်စစ်သော့ခလောက်, ၎င်း၏ drive ကို devices များကကြီးမားသောတံခါးကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုငျသညျ, ခိုင်မာတဲ့မောင်းနှင်မှုများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေးများနှင့်တိုးမြှင့်ပါဝါကို output ကိုကမ်းလှမ်းရာဂီယာ box ကိုအတူမော်တာပေါင်းစပ်ဖို့ဥရောပနည်းပညာချမှတ်။
တဦးတည်းအထုပ်အားလုံးကိုခွန်အားအလှအပနှင့်နည်းပညာများကိုအလိုအလျောက်လျှောတံခါး Hongfa ရဲ့မျဉ်းကြောင်းလက်တွေ့ကျကျမဆိုလျှောက်လွှာအဘို့အဝင်ပေါက်ဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ တစ်ခုကသီးသန့်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုမျှသာတိုးတိုးလေးမှလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆူညံသံကိုလျှော့ချ Hongfa ရဲ့အသံက-dampening လမ်းကြောင်းနှင့်အဆောက်အဦဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းရွှေ့နိုင်တုန်ခါမှုပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုရပ်လိုက်နိုင်သည်။
အလိုအလျောက်တံခါးပစ္စည်းများ အလိုအလျောက်ဆွဲယူတံခါးကိုဖွင့ ်. အလိုအလျောက်ဆွဲယူတံခါးအော်ပရေတာ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အလိုအလျောက်တံခါးပစ္စည်းများ အလိုအလျောက်တံခါးစနစ်များ